Home Wararka Astaamihii kala guurka oo laga dareemayo Muqadisho iyo Farmaajo oo albaabada ka...
Astaamihii kala guurka oo laga dareemayo Muqadisho iyo Farmaajo oo albaabada ka xirmayaan
Labo Sano ka hor, waxaa awooda siyaasadeed ee dalka ay gacanta ugu jirtay Farmaajo iyo kooxaha u adeega, Ma jirin kulamo ka dhacaayay Xarunta Xalane oo mucaaradku kula kulmayeen beesha caalamka, sidoo kale waxaa xadidnaa dhaq-dhaqaaqa siyaasadeed ee beesha calaamka iyo kan mucaraadka. Habada sadaxdii asbuuc la soo dhaafay waxa magalaada Muqadishu ka soo muuqanaayay astaamihii lagu yaqiinay xiliga kala guurka ee dowalada Soomaaliya.
Xiliga kala guurka aha ayaa waxa ay dowlada hogaanka haysaa lumisaa kalsoonida beesha Caalamka, rabitaanka shacabka, waxaana bilaawda in qaar ka mida hogaanka dalka ay bilaabaan in ay si farsamaysan uga xuubsiibtaan dowlada ay ka tirsan yihiin iyaga oo ka fakaraya mustaqbalkooda.
Xarunta Xalane ayaa isku badashay madaxtooyada ku meelgaarka ee Soomaaliya. Madaxtooyada ku meel-gaarka ah ayaa halkaas ahaandoonto inta laga gaarayo doorashada la filaayo in ay dalka ka dhacdo horaanta sanadka 2021. Waxaa durbadiiba soo muuqanaya dhamaan astaamihii kala guurka ee dowlada Soomaaliya.
Astaamaha kala guurka, hadana ka soo muuqanaya dowlada Farmaajo, waxaa ka mida:
Beesha Caalamka oo bilaawaday in sameeystaan xiriiro cusub oo ka soo horjeedo dowlada Fedaraalka, kuna dhiirigaliya mucaaradka in ay la yeeshaan kulamo gaar-gaar ah.
Mas’uuliyiinta dowlada, gaar ahaan kuwa sheegta in ay ku dhaw-dhaw yihiin Ra’iisal Wasaaraha iyo Madaxweynaha oo bilaaba in ay xiriiro la furtaan mucaradka ayaga oo ka fakarayo mustaqbalkooda siyaasadeed
Hantida dowlada oo la bilaabo in la boobo, gaar ahaan qoysaska madaxweynaha iyo kan Ra’iisal Wasaaraha
Mucaraadka iyo dowlada oo u kala dhuunta beesha caalamka si ay u kasbadaan taageerada dowladaha qaar
Hogaanka ciidmada amniga oo xiriir hoose la sameeysta mucaaradka lagu tuhmayo in ay ku guulaysan doonaan doorashada soo socoto
Safiirada Soomaaliya u fadhiya dibada oo dhankooda xiriir toos ah la sameeysta mucaaradka ay ku tuhmayaan sameyn siyaasadeed
Waxaa maalinba maalinta ka danbeeysa sii yaraanaya dad magac ku leh ummadda Soomaaliyeed oo difaacaya danaha Farmaajo iyaga oo ilaashana karamaadooda
Dowlada Farmaajo ayaa ku sifoowday dhamaan qodobada kor ku xusan, waxaana muuqato in madaxtooyadii Soomaaliya loo raray Xarunta Xalane oo ay ka dhacaan shirarka muhimka ah ee looga arinsanayo mustaqbalka Soomaaliya.
Laga bilaabo bisha Maarso ee sanadka soo socda, waxa gabi ahaanba gacanta ka baxaya awooda siyaasadeed ee Farmaajo iyo kooxaha la shaqeeysto, waxaa bilaabanayo ololaha ka dhan ah Farmaajo iyo kooxaha la shaqeeysto.
Awoodiisa ciidan iyo mida siyaasadeed oo ku soo ururi doonto tuugmo iyo raaligalin uu siin doono kooxahii uu danbiga ka galay. Talabadaas ayaana sii burburin doonto karamadii yarayd ee uu ku helay magaca Madaxweynanimada.
Farmaajo ma lahaan doonaa caqli iyo aragti uu uga hortago dhibataada siyaasadeed ee ku soo wajahan iyo dhaawaca uu gaarsiinayo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo tan beesha uu ka dhashay ee uu ku helay kursiga uu hada ku fadhiyo, mise Villa Soomaaliya ayuu ku sugayaa in loogu soo galo.